Faahfaahinta cabbirrada shaashadda cusub ee iPhone 14 Pro iyo 14 Pro Max | IPhone News
ka xanta agagaarka naqshadaha cusub ee iPhone 14 waa habka maalinta. Codku waa mid caadi ah: Apple waxa ay doonaysaa in ay soo saarto qalab leh naqshad joogto ah marka laga reebo ka saarista darajada iPhone 14 Pro iyo Pro Max. Ugu dambayntii, tufaaxa weyni waxa uu kala sooci doonaa moodooyinka 'Pro' si ka baxsan kamarada dambe ee saddexaad. oo uu soo maro naqshad cusub oo kaniini ah oo xagga hore ah. Dhowr saacadood ka hor, warbixin ayaa la daabacay halkaas oo cabbirrada shaashadda ee moodooyinkan Pro-ga ah ay ka soo baxeen oo aan aragno taas cabbirku si weyn uma korodho laakiin marka la eego heerka shaqada waxaa cad in ay jiri doonaan isbedelo.
Isbeddel yar oo ku yimaadda iPhone 14 Pro iyo cabbirrada shaashadda Pro Max
IPhone 14 cusub ayaa imaan doona Sebtembar. Ilaa iyo markaas, waxaan weli haysanaa waddo dheer oo aan ku socono oo ku saleysan leaks, xanta iyo fikradaha qeexaya, xitaa si ka sii badan, mustaqbalka casriga ah ee Apple. Waxa noo cad ilaa hadda taas IPhone 14 wuxuu bilaabayaa isbeddel wareeg ah oo qayb ahaan ah baabi'inta darajo ee terminalka Pro.
Sida aan hore u soo sheegay, Apple ayaa go'aansaday ka saar darafka markii ugu horaysay kasoo muuqday iPhone X ee iPhone 14 Pro iyo iPhone 14 Pro Max. Tani, tufaaxa weyni wuxuu sameeyaa farqi weyn oo ku saabsan heerka naqshadeynta marka loo eego nooca caadiga ah iyo Max. Laakin sidoo kale, darajadu waxay ku macsalaamaysay salaan cusub 'dalool + kiniinka' naqshad qaabaysan. Naqshaddan cusub wax yar ayuu weyneeyaa cabbirka shaashadda.
Marka loo eego xogtii ugu dambeysay ee uu bixiyay falanqeeyaha Ross dhalinyaro akoonkiisa Twitter-ka waxa ay noqonaysaa cabbirada:
Haddii aan isbarbar dhigno cabbirradan jiilka hadda jira ee iPhone 13 Pro iyo Pro Max oo leh darajada, waxaan aragnaa in ay yar tahay isbeddel la taaban karo oo u dhexeeya cabbirrada shaashadda:
Aynu sidoo kale xasuusano taas IPhone 14 bezels ayaa noqon doona mid wareegsan oo cidhiidhi ah. Inkasta oo tani aysan soo saarin isbeddel weyn oo ku saabsan cabbirka muraayadaha, heerka muuqaalka waxay daabacan kartaa isbeddel weyn oo ka dhigaya aaladaha inay u muuqdaan kuwo weyn. Hadda waxaa la joogaa waqtigii lagu falanqeyn lahaa fursadaha shaashadda ee heerka software in kororka shaashadda ee iPhone 14 Pro iyo Pro Max ay siiso Apple. Miyaynu ugu dambayn arki doonaa boqolleyda batteriga agtiisa sumadiisa ee ku jirta barta xaaladda? Dhig sharadkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 14 » Faahfaahinta cabbirrada shaashadda cusub ee iPhone 14 Pro iyo 14 Pro Max
Podcast 13x31: Nabadgelyo iPod-ka, ha noolaado iPhone-ka